Iyo Entity Resolution Inowedzera Kukosha kune Yako Matanho Ekushambadzira | Martech Zone
Nhamba huru yeB2B vatengesi - vangangoita 27% - vanobvuma izvozvo data isina kukwana yavabhadhara 10%, kana mune zvimwe zviitiko, zvakatowanda mukurasikirwa kwemari kwepagore.
Izvi zvinonyatsojekesa nyaya yakakosha yakatarisana nevazhinji vatengesi nhasi, uye iyo: yakashata data mhando. Iyo isina kukwana, inoshaikwa, kana yakashata-yemhando data inogona kuve nemhedzisiro yakakura pakubudirira kwemaitiro ako ekushambadzira. Izvi zvinoitika sezvo angangoita ese edhipatimendi pakambani - asi kunyanya kutengesa uye kushambadzira - zvinokurudzirwa zvakanyanya nedata resangano.
Kungave kwakazara, 360-kuona kwevatengi vako, vanotungamira, kana tarisiro, kana rumwe ruzivo rwune chekuita nezvigadzirwa, sevhisi zvinopihwa, kana nzvimbo dzekero - kushambadzira ndiko kwazvinoungana zvese. Ichi ndicho chikonzero vatengesi vanonyanya kutambura kana kambani ikasashandisa akakodzera dhata manejimendi masisitimu ekuenderera mberi kwedata data uye kugadzirisa kwemhando yedata.
Mune ino blog, ndinoda kuunza kutarisisa kune yakajairika dambudziko remhando yedata uye kuti rinokanganisa sei maitiro ako akakosha ekushambadzira; tichazotarisa mhinduro yedambudziko iri, uye pakupedzisira, tichaona kuti tingaimisa sei nguva dzose.
Yakakura Dhata Yemhando Dambudziko Rakatarisana Nevashambadzi
Kunyangwe, hurombo hwemhando yedata hunokonzera runyorwa rurefu rwezvinhu zvevashambadzi pakambani, asi kuendesa mhinduro dzedhata kune 100+ vatengi, iyo inonyanya kuzivikanwa yemhando yedata nyaya yatakaona vanhu vakatarisana nayo ndeye:
Kuwana imwe maonero eiyo yakakosha data assets.
Iyi nyaya inobuda kana maduplicate marekodhi akachengeterwa chinhu chimwe chete. Pano, izwi rekuti mubatanidzwa rinogona kureva chero chinhu. Kunyanya, munzvimbo yekushambadzira, izwi rekuti mubatanidzwa rinogona kureva: mutengi, mutungamiri, tarisiro, chigadzirwa, nzvimbo, kana chimwe chinhu chakakosha pakuita kwezviitwa zvako zvekushambadzira.
Mhedzisiro Yeduplicate Records PaMaitiro Ako Ekushambadzira
Kuvepo kwemarekodhi akadhindwa mumadhataseti anoshandiswa pazvinangwa zvekushambadzira anogona kuve anotyisa kune chero mushambadzi. Kana iwe uine marekodhi akadhindwa, anotevera ndeaya akakomba mamiriro aunogona kusangana nawo:
Yakatambisa nguva, bhajeti, uye kuedza -Sezvo dhatabheti yako iine akawanda marekodhi echimwe chinhu chimwe chete, unogona kupedzisira wadyara nguva, bhajeti, uye kuedza kakawanda kumutengi mumwechete, tarisiro, kana kutungamira.
Hatikwanise kufambisa zviitiko zvemunhu -Duplicate marekodhi kazhinji ane zvikamu zvakasiyana zveruzivo nezve chimwe chinhu. Kana iwe wakaita mishandirapamwe yekushambadzira uchishandisa maonero asina kukwana evatengi vako, unogona kupedzisira waita kuti vatengi vako vanzwe vasinganzwike kana kusanzwisiswa.
Mishumo yekushambadzira isina kururama -Nemarekodhi akadhindwa edatha, unogona kupedzisira wapa maonero asina kunaka ekuedza kwako kushambadzira uye kudzoka kwavo. Semuenzaniso, wakatumira maemail ekutungamira zana, asi wakangogamuchira mhinduro kubva kugumi - zvingangove makumi masere chete kubva pamazana iwayo aive akasiyana, uye mamwe makumi maviri aive akadhindwa.
Kuderedza kushanda zvakanaka uye kubudirira kwevashandi -Kana nhengo dzechikwata dzichitora data yechimwe chinhu uye kuwana akawanda marekodhi akachengetwa munzvimbo dzakasiyana siyana kana kuunganidzwa nekufamba kwenguva munzvimbo imwechete, inoita sechivharo chikuru mukubudirira kwevashandi. Kana izvi zvikaitika kakawanda, zvino zvinokanganisa kushanda zvakanaka kwesangano rose.
Hatikwanisi kuita shanduko chaiyo -Kana iwe wakarekodha muenzi mumwechete sechinhu chitsva pese pavanoshanyira nzira dzako dzemagariro kana webhusaiti, zvinenge zvisingaite kuti iwe uite chaiyo shanduko, uye kuziva nzira chaiyo yakateverwa nemuenzi pakutendeuka.
Tsamba dzemuviri nedzemagetsi dzisina kutumirwa -Ichi ndicho chinowanzoitika mhedzisiro yemarekodhi akadhindwa. Sezvambotaurwa, rimwe nerimwe rekodhi rekodhi rinenge riine maonero echikamu (ndicho chikonzero marekodhi akapedzisira aita seanodzokorora mune yako dataset pekutanga). Nechikonzero ichi, mamwe marekodhi anogona kunge asina nzvimbo dzepanyama, kana ruzivo rwekufonera, izvo zvinogona kukonzera kuti tsamba dzikundikane kutumira.
Chii chinonzi Entity Resolution?
Entity resolution (ER) inzira yekuona kana mareferensi kumasangano epasirese akaenzana (chinhu chimwe chete) kana kuti asina kuenzana (akasiyana masangano). Mune mamwe mazwi, inzira yekuziva uye kubatanidza marekodhi akawanda kuchikamu chimwe chete apo zvinyorwa zvinotsanangurwa zvakasiyana uye zvakasiyana.
Entity Resolution uye Ruzivo Hunhu naJohn R. Talburt
Kuita Entity Resolution mune Yako Yekushambadzira Dataset
Waona kukanganisa kunotyisa kwezvakadzokororwa pakubudirira kwezviitwa zvako zvekushambadzira, zvakakosha kuti uve nenzira yakapfava, asi ine simba. kudhinda ma datasets ako. Apa ndipo pane process ye mubatanidzwa kugadzirisa comes in. Zviri nyore, mubatanidzwa resolution inoreva nzira yekuziva kuti ndeapi marekodhi echinhu chimwe chete.
Zvichienderana nekuoma uye mamiriro emhando yemaseti ako, maitiro aya anogona kuve nematanho akati wandei. Ini ndichakutora iwe kuburikidza nenhanho imwe neimwe yeiyi nhanho kuti iwe unzwisise kuti zvinosanganisirei chaizvo.
Cherechedza: Ini ndichashandisa izwi rekuti 'nhengo' ndichitsanangura maitiro pazasi. Asi maitiro akafanana anoshanda uye anogoneka kune chero mubatanidzwa une chekuita nekushambadzira kwako, senge mutengi, mutungamiri, tarisiro, kero yenzvimbo, nezvimwe.
Matanho MuEntity Resolution process
Kuunganidza marekodhi ezve data anogara munzvimbo dzakasiyana dze data -Iri ndiro danho rekutanga uye rakakosha rekuita, kwaunoona apo chaizvo zvinyorwa zvesangano zvakachengetwa. Iyi inogona kunge iri data rinouya kubva pasocial media ads, webhusaiti traffic, kana nemaoko kutaipa nevatengesi reps kana vashandi vekushambadzira. Kana zvitubu zvaonekwa, zvinyorwa zvese zvinofanirwa kuunzwa pamwechete panzvimbo imwe.
Kunyora marekodhi akasanganiswa -Kana marekodhi aunganidzwa pamwechete mune imwe dhata, yave nguva yekunzwisisa iyo data uye kuburitsa zvakavanzika zvakavanzika nezve chimiro chayo uye zvirimo. Kurongeka kwedata kunoongorora data rako uye kuona kana kukosha kwedata kusina kukwana, kushaikwa, kana kutevedzera isiriyo patani uye fomati. Kunyora dhatabheti yako kunoburitsa zvimwe zvinhu zvakadaro, uye kunosimbisa mikana yekuchenesa data.
Kuchenesa uye kuenzanisa zvinyorwa zvedata -Yakadzama data mbiri inokupa iwe unogona kuita runyorwa rwezvinhu zvekuchenesa uye kumisa dataset yako. Izvi zvinogona kusanganisira matanho ekuzadza data rakarasika, kugadzirisa mhando dzedata, kugadzirisa mapatani uye mafomati, pamwe nekupatsanura minda yakaoma kuita sub-element kuti zviri nani kuongorora data.
Kufananidza uye kubatanidza zvinyorwa zvesangano rimwechete -Zvino, marekodhi ako edatha akagadzirira kufananidzwa uye kubatanidzwa, uye wozopedzisa kuti ndeapi marekodhi ndeechimwe chinhu chimwe chete. Maitiro aya anowanzo kuitwa nekushandisa indasitiri-giredhi kana proprietary kuenzanisa maalgorithms ayo anogona kunyatsoenderana pane zvinozivikanwa hunhu, kana mechi isinganzwisisike pamusanganiswa wehunhu hwechinhu. Kana zvawanikwa kubva kualgorithm yekufananidza zviine zvisirizvo kana zvine manyepo, ungangoda kukwenenzvera algorithm kana nemaoko kumaka machisi asiri iwo seanodzokorora kana asina-duplicate.
Kuita mitemo yekubatanidza masangano kuita zvinyorwa zvegoridhe - Apa ndipo panoitika kusangana kwekupedzisira. Iwe pamwe hausi kuda kurasikirwa nedata nezve chivakwa chakachengetwa pamarekodhi, saka nhanho iyi ndeyekugadzirisa mitemo yekusarudza:
Ndechipi chinyorwa chiri chinyorwa chikuru uye zvakapetwa zvacho zviripi?
Ndeupi hunhu kubva kune zvakapetwa hwaunoda kutevedzera kune master rekodhi?
Kana iyi mitemo ichinge yagadziriswa uye yaitwa, iyo inobuda seti yemarekodhi egoridhe emasangano ako.
Gadzira Iyo Iri Kuenderera Entity Resolution Framework
Kunyangwe isu takapfuura neyakapfava nhanho-ne-nhanho gwara rekugadzirisa masangano mune yekushambadzira dataset, zvakakosha kuti unzwisise kuti izvi zvinofanirwa kubatwa senzira inoenderera kusangano rako. Mabhizinesi anodyara mari mukunzwisisa data ravo uye kugadzirisa iwo musimboti wemhando nyaya akagadzirirwa kukura kwakanyanya kuvimbisa.
Kuti uite nekukurumidza uye nyore kuita maitiro akadai, iwe unogona zvakare kupa vashandisi vedatha kana vatengesi vekambani yako nyore kushandisa-entity resolution software, inogona kuvatungamira kuburikidza nematanho ataurwa pamusoro.
Kupedzisa, isu tinogona kutaura zvakachengeteka kuti duplicate-yemahara dataset inoshanda semutambi akakosha mukukwidziridza ROI yezviitwa zvekushambadzira uye kusimbisa mukurumbira wemhando pamatanho ese ekushambadzira.
Tags: kutendeuka attributionkunyatso dhatadata datadeduplificationakasiyana masanganoduplicate zvinyorwazvakapetwasanganomubatanidzwa kugadzirisaermarketing datasetsmarketing reportingchimwe chinhuchii